Duufaano Halis ah oo ku Dhuftay Qaybo kamid ah Gobolka Gardafuu ee Puntland – Radio Daljir
Nofeembar 3, 2015 4:32 b 0
November 03, 2015 (Daljir) — Wasaaradda arimaha Gudaha Dowladdaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland ayaa maanta ka warbixisay qasaaraha ay gaysatay duufaanta shabaala oo ku dhufatay xeebaha Gobalka Gardafuu ee Puntland.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda arimaha gudaha dowladdaha hoose iyo horumarinta reer miyiga Puntland Cabdulaahi Xaashi qoob deero oo maanta saxaafada kula hadlay Magaalada Garoowe ayaa sheegay in duufaantu ay jartay wadadii lafa goroyo oo isku xiri jirtay Gobalka Gardafuu iy deegaanada kale ee Puntland sidookale wadada xogaad ayaa iyana go,day .
Magaalada Caluula ee Gobalka garafuu ayaa ku jirta xaalad go,doon oo dhanka birriga iyo badda ah kadib markii ay Go,day wadii gali jirtay waxaana kaliya laga gali garaa Garoonka diyaaradaha sidaas waxaa warbaahinta u sheegay Maamulaha Garoonka diyaaradaha Caluula.
Duufaanta oo la saadaalinayo in xoogeeda ay arbacada bari ah soo gaarto deegaanada Puntland ayaa waxaa ay sidookale ay saamayn ku yeelatay doonyo,matooro iyo guryo deegaana xeebeedyada bareedo,barxa iyo tooxin oo ka tirsan Gobalka gardafuu walina lama soo sheegin qasaare nafeed oo ka dhashay sida uu sheegay Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arimaha Gudaha Dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga.
Duufaanta waxaa kale oo qasaare weyn u gaysteen Beerihii timirta ee deegaanka sayn oo ka tirsan Gobalka gardafuu in kasta oo aan la sheegin tirada beerahaasi waxaase duufaanta oo wadata dabaylo ay gabi ahaan baabi,say beerihii timirta sida ay Daljir u sheegeen deegaanka.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda arimaha Gudaha Puntland ayaa ka dalbaday in gargaar loo fidyo dadka ay duufaantu wax yeelaysay waxaana uu sheegay in hada uu bilowday gargaar xaga cirka loo marinayo degmada Caluula.